Izinto ezinomdla kunye ezibalulekileyo malunga no-Andrew Jackson
U-Andrew Jackson , ogama lakhe elibizwa nge "Old Hickory," wayengumongameli wokuqala okhethwe ngokwenene. Wazalelwa eMntla okanye eSouth Carolina ngo-Matshi 15, 1767. Kamva wabuyela eTennessee apho waba ligqwetha kwaye wayenendawo yokuhlala ebizwa ngokuthi "iHermitage." Wayekhonza kwiNdlu yabameli kunye neSeti. Kwakhona waziwa ngokuba ngumkhosi onamandla, ephakama ukuba abe nguMkhulu-Jikelele kwiMfazwe ka-1812 . Ezi zilandelayo ziyizona zibakala eziphambili ezibalulekileyo ukuqonda xa ufunda ubomi kunye no-Andrew Jackson.
Imfazwe yaseNew Orleans
NgoMeyi, ngo-1814, ngexesha leMfazwe ka-1812 , u-Andrew Jackson wabizwa ngokuba yi-Major General kwi-Army yase-US. Ngomhla kaJanuwari 8, 1815, wanqoba iBritani kwiMfazwe yaseNew Orleans kwaye wayidunyiswa njengeqhawe. Umkhosi wakhe wadibana nemikhosi yaseBrithani ehlasela njengoko bezama ukuthatha isixeko saseNew Orleans. Imfazwe, ngaphandle kwesixeko, ngokuyinxalenye nje yintsimi enkulu. Imfazwe ithathwa njengowona mkhulu kunqoba kwimpi. Okuthakazelisayo, iSivumelwano saseGhent wasayinwa ngomhla kaDisemba 24, 1814. Nangona kunjalo, akuzange kuvunywe kuze kube ngoFebruwari 16, 1815 kwaye ingcaciso ayizange ifinyelele emkhosini waseLouvia ukuya kwinyanga leyo.
Ukuphazamiseka kunye nokunyulwa kwe-1824
UJackson wagqiba ekubeni asebenzele umongameli ngo-1824 ngokumelene noJohn Quincy Adams . Nangona wayinqobile ivoti eyaziwayo , kuba kwakungenabo uninzi lonyulo iNdlu yabaBameli izimisele umphumo wokhetho. Izazi-mlando zikholelwa ukuba into eyaziwa ngokuba yi-"Corrupt Bargain" eyenziwe yanika iofisi kuYohn Quincy Adams ngokutshintshela uHenry Clay ukuba abe nguNobhala kaRhulumente. Ukuhlaselwa kwesi siphumo kuya kubangela ukuphumelela kukaJackson ngowe-1828. Ukwahlukana kwaphumela ekubeni kwiqela leDemokhrasi-Republican lahlula ezimbini.
Ukhetho lwe-1828 kunye noMntu oqhelekileyo
Ngenxa yokuwa kwelo-1824, uJackson waqanjwa ukuba asebenze ngo-1828 iminyaka epheleleyo emithathu ngaphambi kokukhetho oluzayo. Ngeli xesha, lakhe iqela laziwa ngokuba yi-Democrats. Ukugijima ngokumelene noJohn Quincy Adams owayebizwa ngokuba ngumongameli ngo-1824, le phulo yayingaphantsi kwemiba kunye nangaphezulu malunga nabaviwa ngokwabo. UJackson waba ngumongameli wesikhombisa nge-54% yevoti ethandwayo kunye ne-178 kuma-261 amavoti okhetho. Unyulo lwakhe lubonwa njengoluyisa umntu oqhelekileyo.
Isithintelo seCandelo kunye nokuLungiswa
Ubongameli bakaJackson bekuyixesha lokunyuka kwamacandelo kunye nabasempumalanga abanobudlelwane ekulwa nokunyusa urhulumente wesizwe onamandla . Ngowe-1832, xa uJackson wasayina umrhumo olinganiselweyo kumthetho, iSouth Carolina yagqiba ekubeni "ukungonakali" (inkolelo yokuba urhulumente angakwazi ukulawula into engehambisani nomthetho), abanokuwutyeshela umthetho. UJackson wazisa ukuba uya kusebenzisa umkhosi ukunyanzelisa umrhumo. Njengendlela yokunciphisa, ityala elitsha lenziwe ngowe-1833.
Umtsalane woMtshato ka-Andrew Jackson
URachel Donelson - Umfazi ka-Andrew Jackson. KwiNdawo yoLuntu
Ngaphambi kokuba abe ngumongameli, uJackson watshata nomfazi ogama linguRachel Donelson ngo-1791. URachel wayekholelwa ukuba wayedlwengulwe ngokusemthethweni emva kokuba umtshato wokuqala ungaphumeleli. Nangona kunjalo, oku akuzange kuchaneke kwaye emva komtshato, umyeni wakhe wokuqala watsho uRakeli ngokukrexeza. UJackson kwafuneka ukuba alinde ngo-1794 xa ekugqibeleni wayeza kutshata noRachel. Esi siganeko saqhutyelwa kukhetho lowe-1828 esibangela ukuba loo nto ibandezeleke. Enyanisweni, uRaheli wafa ezimbini kwiinyanga ngaphambi kokuba athathe isikhundla kwaye uJackson wamgxeka ukufa kwakhe kwezi hlaselo.
Njengoko umongameli wokuqala elamkela igunya lika-uongameli, uMongameli uJackson wavusa iindleko ezingaphezulu kunabo bonke oomongameli basekuqaleni. Wasebenzisa i-veto ngezihlandlo ezilishumi elinesibini elinesibini kwi-ofisi yakhe. Ngowe-1832, wasebenzisa i-veto ukuba ayeke ukuhlaziywa kweBili yeBhanki yase-United States.
UJackson wayengumongameli wokuqala ukuba athembele kwiqela elingacwangciswanga labacebisi ababizwa ngokuthi "iKhabinethi yeKhabhinethi" ukubeka umgaqo-nkqubo esikhundleni senqununu yakhe yangempela. Abaninzi balaba cebisi babengumhlobo waseTennessee okanye abahleli bephephandaba.
Xa uJackson egijimela kwikota yesibini ngo-1832, abachasi bakhe bamthi "uKumkani u-Andrew I" ngenxa yokusebenzisa kwakhe i-veto kunye nokuphunyezwa kwakhe kwento ababeyibamba ngokuthi "inkqubo yokuphanga." Wayekholelwa ekuvuyiseni abo babemxhasa kunye nangaphezulu kunoma yimuphi umongameli phambi kwakhe, wabasusa abachasi bezopolitiko kwiofisi ye-federal ukuba bathathe indawo yabo kunye nabalandeli abathembekileyo.
UJackson akazange akholwe ukuba iBhanki yesiBini yaseUnited States yayisiseko somgaqo-siseko kwaye ngokuthe xa kunjalo yayikuthandayo abantu abatyebileyo. Xa umqulu wayo wenyuka ukuhlaziywa ngo-1832, uJackson wavusa. Wongeza imali karhulumente ebhankini kwaye uyifake kwiibhanki zombuso. Nangona kunjalo, ezi bhanki zaseburhulumenteni azizange zilandele izenzo ezibolekileyo zokubolekisa. Ukuzibolekisa kwabo ngokuzikhethela kwabangela ukunyuka kwamaxabiso. Ukulwa nale nto, uJackson wayala ukuba zonke izinto zokuthengwa komhlaba zenziwe ngegolide okanye ngesiliva eza kuba nemiphumo kwi-Panic ka-1837.
UMthetho wokuSuswa koMdaka
UJackson wanika inkxaso yaseJeorgia ukuba avunyelwe ukunyanzela amaNdiya kwilizwe lawo ukuba ahlale eWest. Wasebenzisa uMthetho wokuSuswa kwamaNdiya owaye waphelelwa ngo-1830 waza wasayinwa ngumthetho nguJackson ukuba abanyanzisele ukuba bathuthe. Wenza oku nangona kunjalo ukuba iNkundla Ephakamileyo yayigwebile eWorcester v. Georgia (1832) ukuba abantu baseMelika babengenako ukunyanzeliswa ukuba bahambe. Oku kukhokelela ngqo kuMzila weeNyembezi apho ukusukela ngo-1838-39, amabutho ase-US ahokela ngaphezu kwe-Cherokees engama-15,000 ukusuka eGeorgia ukuya kwi-Oklahoma. Kulinganiselwa ukuba malunga nama-4,000 aseMelika aseMerika afela ngenxa yalo mqulu.
Imizekelo yokuPhelelwa koThemba kwiNdlela
Rosh HaShanah Customs Customs
Iintlanzi zokubandakanya isiKhulu kunye namaFane
Umzobo wokukrazula uhlahlela yonke i-skater yolwazi kufuneka ukwazi
UGiselle: I-Ballet yamaRoma
I-imeyile ifika i-Arriving Way emva kwexesha, iiNgxelo ze-Watchdog